Junior Accountant | Orb Design Co., Ltd ﻿
Junior Accountant F (.)
11.12.2019, Full time , Design / Decoration
Company: Orb Design Co., Ltd
•	Cash Book ရေးသွင်းရမည်။
•	ဘဏ်တွင် ငွေသွင်း ၊ ငွေထုတ် လုပ်ရမည်။
•	Admin အလုပ်ပါ တွဲလုပ်ရမည်။
•	LCCI Level2ပြီးမြောက်ထားသူ ဖြစ်ရမည်။
•	Computer excel အတန်အသင့် ကျွမ်းကျင်ရမည်။
•	အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ( ၁) နှစ် ရှိရမည်။
•	Accounting software တစ်ခုခု တတ်မြောက်ထားသူ ဦးစားပေးမည်။
We offer •	လစာ-ညှိနှိုင်း
•	Female (1) post
Work location 23/B, Khay Mar St., Thiri Khaymar Ward,Sanchaung,Yangon.
Job posted: 11/12/2019
1 Day, Full time , 150 000 Ks, Design / Decoration
[အောင်မြင်လိုသော လူငယ်များနှင့် လက်တွဲ အလုပ်လုပ်ချင်ပါသည်။] Job Description လုိုအပ်သော အရည်အချင်းများ - အသက် ၁၈ မှ ၂၈ အတွင်း ဖြစ်ရပါမည်။ - ဘွဲ့ရ (သို့) အဝေးသင် တက်နေသူများကို ဦးစားပေးမည်။ - Marketing နှင့်ပတ်သက� ...
Sales Assistant M (3)
•	အရောင်းပိုင်း စိတ်ဝင်စားပြီး ရိုးသားကြိုးစား၍ သွက်လက်စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ •	အများနှင့်ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီး ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ •	အသင်းအဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်လို� ...
•	Can travel any region •	Good communication skill and Presentation skill •	able to produce own construction drawings. •	work with consultants and site engineers •	deal with client's project brief •	able to use email professionally
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ရမည်။ •	အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	Cash Book ရေးသွင်းရမည်။ •	ဘဏ်တွင် ငွေသွင်း ၊ ငွေထုတ် လုပ်ရမည်။ •	Admin အလုပ်ပါ တွဲလုပ်ရမည်။
Junior Sales & Marketing M/F (1)
•	Can Lead Design Team •	Manage the tasks and schedules of the interior design team •	Manage Project timeline if all running project •	Oversee and coordinate design details between clients, other consultations and designer •	Lead in design conceptualization and development •	Check detail drawing and material specification prepared by designer •	Excellent communicator and great team player •	Can travel any region •	can work independently
5 Days, Full time , Design / Decoration
•	Daily Cash Book •	Trial Balance •	Debtors and creditors control •	Monthly sale report •	Admin နှင့်ဆိုင်သော အလုပ်ပါတွဲ လုပ်ရမည်
•	လေ့လာသင်ယူချင်စိတ်ရှိသူ ကြိုးစားအားထုတ်သူများအတွက် ကောင်းမွန်သော အခွင့်အလမ်းများ ရှိပါမည်။ •	ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် decoration စိတ်ပါဝင်စားသူများကို ဦးစားပေးမည်။ Yellow Box Trading တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်။
Junior Accountant Accountancy Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon Orb Design Co.,Ltd Accountancy Jobs Accountancy Jobs Design/Decoration Jobs in Myanmar, jobs in Yangon